Semalt: Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny metafom-pitsaboana iray
Fanoritsoritana Meta dia fomba iray tena ilaina hanehoana ny zavatra rehetra tian'ny mpijery anao ho hitanao. Io no avo indrindra amin'ny pejinao amin'ny valin'ny fikarohana. Tsy afaka manao ianao raha tsy misy famaritana meta tsara momba ny meta raha toa ka mandray andraikitra amin'ny famaritana ny tahan'ny CTR - llc-portland. Raha ny marina, raha manoratra amin'ny fomba mandaitra ianao dia hahatratra ny fitomboany ny fifamoivoizanao.
Mba hahombiazanao dia tokony arahinao araka ny torolalana nomen'i Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Dingana 1: manomboka amin'ny matoanteny fihetsika tsara
Fantatrao ve fa amin'ny alalan'ny fampiasana ny matoanteny mahery fihetsika dia afaka manentana ny mpanatrika hanao zavatra ianao? Ny zavatra rehetra mitranga dia tsikitsiky tsotra - ny matoanteny matoanteny - toa "Discover", "Become", "Identify" na "Learn". Ho gaga ianao amin'ny fomba hahatongavan'io olona io ho any amin'ny kibonao.
Dingana 2: manome ny mpihaino hahafantatra ny zavatra hitranga aminao
Raha afaka mitarika ny mpihaino hahatakatra ny fomba amoahana ny votoaty sy ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny tombontsoa amin'ny alàlan'ny fisintonana ny votoatinao, dia hitifitra ny tsindry ahafahanao mijery ny taham-pahafahanao. Raha tokony hifantoka amin'ny teny fanalahidy ianao, dia miezaha mamela ny famaritana ny meta ho fandresen-dahatra araka izay azo atao. Aza mifangaro..Na dia zava-dehibe aza ny mamela ny famaritana ny meta ho laharam-paharesy, aza adino ny mamafy amin'ny teny fanalahidy sasantsasany. Ny hevitra eto dia ny mahita ny fifandanjana eo amin'ny fandresen-dahatra sy ny fanamafisana ny teny fanalahidy.
Dingana 3: Ataovy azo antoka fa ny meta dia mihoatra ny 155-isa lava
Raha mamela anao izy ireo, dia afaka mihazakazaka ary amin'ny hoe iza ianao no toy ny marika, vokatra / asa ary ny sisa. Na izany aza, tsy afaka ary tsy tokony mihoatra ny tarehintsoratra 155 ianao. Inona no mitranga rehefa manoratra meta lava momba ny tenanao ianao momba ny tenanao ho toy ny tsara indrindra. Ny olona sasany dia afaka miady hevitra fa tsy ity no zavatra ratsy indrindra mety hitranga, fa mba hieritreretana izany, mila mila mametraka loha na taila ny famaritana meta, sa tsy izany?
Dingana 4: Aza adino ny mampiditra ny teny fototra ao amin'ny meta
Tadidinao ve fa nanonona zavatra momba ny teny fanalahidy ianao? Eny ary, izao isika dia mahazo izany. Ny tenimiafinao fototra dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny famaritana meta. Ataovy azo antoka fa mamaky tsara izy io. Aza manahirana ny mamerina azy imbetsaka, Google dia hampiseho azy ho sahy raha toa ka ampidirinao izany (teny fototra) tsara. Araho ireo torolalana, ary ny zava-drehetra dia mianjera amin'ny toerana.
Dingana 5: Miezaha hamita ny famaritana ny meta miaraka amin'ny antso an-tanana
"Discover More On", "Manomboka" na "Learn More" dia hanosika ny mpihaino hiditra amin'ny votoatinao. Hamafiso ny fahaizanao mamorona amin'ny fitenenana amin'ny matoanteny hafa an-tsokosoko.
Rehefa mihodinkodina amin'ny ataontsika isika ary tsy misy famaritana meta, dia tadidio fa tokony hahita ekipa iray hanaraka hevitra vaovao ianao. Raha mila fanampiana dia zarao izay nianaranao avy amin'ny torohevitry ny manam-pahaizana ao amin'ny Semalt. Izany fomba izany no ahafahanao manatanteraka ny famarafaranao meta ho an'ny tombontsoanao. Adinoy izay heverinao fa mahatonga azy io amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana - manomboka amin'ny famaritana meta anao izany.